Shiinaha Tilapia Fish Collagen Peptide warshad iyo alaableyda. Huayan
Marka lagu daro qalabka heerka koowaad, qalab cayriin oo casri ah iyo teknolojiyad casri ah, shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa xakamaynta tayada iyo maareynta geeddi-socodka wax soo saarka oo dhan, waxayna ku dadaaleysaa inay ku guuleysato sida ugu fiican dhammaan isku xirnaanta si loo hubiyo tayada alaabada ugu dambeysa.
Kalluunka loo yaqaan 'collagen peptide', 'collagen' waxaa lagu xakameeyaa culeyska molecule-ka 1000-3000 Dalton iyadoo la adeegsanayo astaamaha acid-base iyo enzyme. Waxaa loo yaqaan 'molecule peptide' yar. Peptide waa walax udhaxeysa amino acids iyo borotiinada makro-molecule. Peptides badan waa laab laab si ay u sameeyaan molecule protein. Peptides waa jajabka borotiinka saxda ah. Molikiyuulkeedu waa nanometer keliya cabir ahaan. Gastrointestine, marinka dhiigga iyo maqaarku way fududahay in la dhuuqo, heerka cabbitaankiisuna aad ayuu uga sarreeyaa kan borotiinka macromolecule.
Xigasho: Tilapia maqaarka ama miisaanka tilapia
Miisaanka molecule: 1000-3000DA, 500-1000DA, 300-500DA.
Gobolka: budada, granule
Midab: Caddaan ama huruud khafiif ah; xalka waa midab la’aan ama jaalle khafiif ah
Dhadhamiya oo ur: Iyada oo la soo saaray dhadhan iyo ur gaar ah.
Astaamaha: Borotiin sarreysa, oo aan lagu darin ， aan wasakheyn
(1) Collagen ayaa difaaci kara maqaarka, ka dhigi kara maqaarka mid jilicsan;
(2) Collagen waxay ilaalin kartaa isha, waxay ka dhigi kartaa kiliyaha hufan;
(3) Collagen waxay ka dhigi kartaa lafaha mid adag oo jilicsan, ma ahan mid jilicsan;
(4) Collagen wuxuu kobcin karaa isku xirnaanta unugyada muruqyada wuxuuna ka dhigi karaa mid jilicsan oo dhalaalaya;
(5) Collagen wuxuu ilaalin karaa oo xoojin karaa viscera;
(6) Collagen wuxuu kaloo hayaa shaqooyin kale oo muhiim ah: Hagaajinta difaaca jirka, ka hortagga unugyada kansarka, firfircoonida unugyada shaqeynta, homeostasis, firfircoonida muruqyada, daweynta arthritis-ka iyo xanuunka, ka hortagga gabowga maqaarka, baabi'inta duuduubka.
(1) Waxyaabaha lagu daro qurxinta waa culeys yar oo kelli ah, si fudud ayuu u nuugaa. Waxay kakooban yihiin tiro aad u tiro badan oo ah kooxo hidde ah, arrimo qoyan oo aad ufiican isla markaana dheelitiraya qoyaanka maqaarka, Waxay kaa caawinaysaa in laga takhaluso midabka hareeraha indhaha iyo finanka, maqaarku ha ahaado mid cad oo qoyan, nasasho iyo wixii la mid ah.
(2) Collagen waxaa loo isticmaali karaa cunnooyin caafimaad qaba; waxay ka hortagi kartaa cudurrada wadnaha iyo xididdada;
(3) Collagen wuxuu u adeegi karaa cunto kaalshiyam ah;
(4) Kolajka waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro cuntada;
(5) Kolajka waxaa si weyn loogu isticmaali karaa cuntada barafaysan, cabitaanka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, nacnac, keegaga iyo wixii la mid ah.
Hore: Kalluunka Badda Oligopeptide
Xiga: Oyster Peptide